Dab xoog leh oo ka kacay suuq Boocle ee Dharkeynley - Bulsho News
Afisyooni: Dhageysiga Khudbadaha Musharixiinta Aqalka Sare Ee Somaliland Oo Saaka...
Dab xoog leh oo ka kacay suuq Boocle ee Dharkeynley
Muqdisho (Caasimada Online) – Dabkaan oo geystay khasaaro hantiyadeed ayaa waxaa uu ka kacay Suuq Boocle oo kuyaal degmada Dharkeenleey ee Gobolka Banaadir.
Dabka ayaa goobjoogayaal sheegeen in uu ka bilaawday Goob lagu iibiyo Qalabka Electronic, isla markaana uu ku faafay goobo kale.
Dadka deegaanka & Qaar kamid ah Ganacsatada suuqa ayaa ku howlan daminta dabka waxaana la wargeliyay waaxda Dab damiska Dowladda Hoose iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay uga hortagaan in uu u gudbo goobo horleh.
“Dabka waxa uu kusii fidayaa qaybta Bacadlaha, waxaa la wacay dab damis, dabeysha ayaa dhinacaas u baxeysa, dedaalka xooggiisa waa in laga hortagaa in uu suuqa guud ahaan uu saameeyo dabkaan” Sidaasi waxaa yiri qof kamid ah Dadka ku howlan daminta Dabka oo goob ganacsi ku leh Suuq Boocle.
Goobaha ganacsiga waxaa laga saaray hantida taalla sida ay xaqiijiyeen dad ku howlan daminta dabkaas oo gurmadka lagu baqtiijin lahaa socota.
Cristiano Ronaldo oo markale guul muhiim ah ku...
Madaxweyne Bill Clinton oo isbitaal la dhigay iyo...
Raac tallaabooyinkan si aad kor ugu qaaddid farxaddaada
Bandhig faneed: Maxay isku heystaan fannaaniinta iyo culimada...
Siyaasiyiin si weyn uga fal-celiyey guusha Dubbe uu...
French far right’s new face: the meteoric rise...
Sawirro: Rooble oo si weyn loogu soo dhoweeyay...
Didier Deschamps Oo Magacaabay Xiddiga U Qalma Ku...
Video: Fiqi oo soo bandhigay qodobo ‘shaki gelinaya’...
Antonio Conte Oo Go’aan Ka Gaadhay Xiisaha Arsenal...
Booliiska gobolka Bari oo ka hadlay askari dad...
Alexandre Lacazette Oo Diiday Heshiis Cusub Oo Ay...